The Zimbabwe National Anthem was written by Solomon Mutsvairo and put into song by Fred Changundega. Initially the country used Ishe Komborerai Africa before it was replaced in favour of Mustvairo's. Below are the Shona, Ndebele and English lyrics of the national anthem.
Simudzai mureza wedu weZimbabwe Yakazvarwa nemoto wechimurenga; Neropa zhinji ramagamba Tiidzivirire kumhandu dzose; Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe. Tarisai Zimbabwe nyika yakashongedzwa Namakomo, nehova, zvinoyevedza Mvura ngainaye, minda ipe mbesa Vashandi vatuswe, ruzhinji rugutswe; Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe. Mwari ropafadzai nyika yeZimbabwe Nyika yamadzitateguru edu tose; Kubva Zambezi kusvika Limpopo, Navatungamiri vave nenduramo; Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.
Retrieved from "https://www.pindula.co.zw/index.php?title=Zimbabwe_National_Anthem&oldid=69273"